हाम्रो आत्मिक आमा (गला ४ः२०-३१) – Daily Devotion
Post category:Bible / Teachings / Verse by Verse
२०. अहिले म तिमीहरुसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुनेथियो, किनकी तिमीहरुका विषयमा म अन्योलमा परेको छु ।
तिनीहरुसँग रहेर असल प्रकारले कुरा गर्ने उत्कट चाहना पावलसँग थियो । यस पत्र कठोर छ तर पावलको तिनीहरुसँग भेटेर सवांद नै परिवर्तन भएको चाहन्छन् । हाम्रो बालिवचनले मानिसमा प्रभाव पार्दछ । एउटा कुकुरलाई मिठो बोलिमा गाली गरे तापनि त्यो खुशी हुने गर्छ ।
“नम्र जवाफले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर वचनले रीस उठाउँछ (हितो १५ः१) ।”
तिनीहरुका व्यवहार देखेर पावलमा सङ्का भएको छ । यहाँ पावल आफ्नो पक्षमा धर्मशास्त्रबाट तर्क गर्दै हुनुहुन्छ । यहूदीहरुले अब्राहालाई ठूलो पात्रको रुपमा राखेर व्यवस्थापालनमा जोड दिएका थिए । यहाँ उनले अब्राहामको इतिहास देखाउदै व्यवस्था र अनुग्रह मिश्रण हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेका छन् ।
परमेश्वरले अब्राहामलाई छोराको प्रतिज्ञा गर्नुभए तापनि लामो समयसम्म पुत्र नहुदा सारा दुखित हुँदै आफ्नो दास हागारद्वारा सन्तान जन्माउन सल्हान दिइन (उत १५ः१–६) । हागारबाट जन्मेको इश्माएल प्रतिज्ञाको सन्तान थिएन तर परमेश्वरप्रति अविश्वासको फल थियो (उत १६) । तर परमेश्वरको शक्तिद्वारा अब्राहामको सय वर्षको उमेरमा इसाहाक जन्मिए (उत २१ः१–५) । इसाहाकले दूध खान छोडेको दिनको भोजमा हागारले इसाहाकको ठट्टा गरिन् । यसरी साराले कमारी हागार र इश्माएललाई निकालिदिए (उत २१ः८–१०) । यसै घटनाको आधारमा पावल तर्क गर्दै छन् ।
२१. तिमीहरु व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरुलाई मलााई भन, व्यवस्थाले के भन्छ के तिमीहरुलाई थाहा छैन ?
गलातीका मानिसहरु व्यवस्थाको अधिनमा त थिएनन् तर त्यसमा हुने चाहना गर्दै थिए । त्यसबाट फर्केर जिवनमा रहनमा पावल उत्कट चाहना गर्दछन् । व्यवस्थामा भनिएका कुराहरुबाट चुनौती दिदै पावल लेख्दछन् (प्रस १९ः१६–२१; २०ः१८–१९) । व्यवस्था भन्नाले दुई अर्थमा लिन सक्छौँ । पहिलो भनेको पवित्रता प्राप्त गर्ने उपाए, र दोस्रो भनेको मोशाका व्यवस्थाका पुस्कतहरु हुन् ।
मिश्रबाट इस्राएलीहको यात्रालाई चित्रात्मक रुपमा दासत्वबाट प्रतिज्ञामा सरेको लिन सक्छौँ । तिनीहरुले उजाडस्थानमा गरेका अनुभव, मन्न, पानी, आदी कुराहरुले दासत्वबाट ख्रीष्टमा स्वतन्त्रताको चित्रण देख्न सक्छौँ (१ कोर १०ः१–१३) ।
२२. किनभने अब्राहामका दुई छोराहरु थिए, कमारीतर्पmबाट एक, अर्कोचाँहि स्वतन्त्र स्त्रीबाट ।
यहूदी राष्ट्रका पिता अब्राहाम जसबाट तिनीहरुले आशिष पाएका थिए । तैपनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशूले पनि अब्रामको पुत्र हुनमा मात्र पर्याप्त नभएको बताउनुभयो (मत्ती ३ः९; यूह ८ः३७—४४) ।
अब्राहामका दुई छोराहरुमध्ये इश्माएललाई शरीरबाटको छोराको रुपमा लिन सक्छौ । ऊ प्रतिज्ञाको पुत्र थिएन तर परमेश्वरको प्रतिज्ञामा अविश्वास गरी मानिसको प्रयासबाट जन्मेको छोरा थियो । वास्तवमा अब्राहामले प्रेम गरेको एउटै पुत्र इसाहान थिए जो प्रतिज्ञाद्वारा थियो (उत २२ः२) ।
यो पत्र गलातीयाका अपरिपक्व विश्वासीहरुलाई लेखिएको हो जो यहूदीहरुबाट प्रभावित भएर व्यवस्थामा ढल्किन चाहन्छन् (१ कोर ३ः१,२) । के विश्वासीहरु व्यवस्थाको अधिनमा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँ पाउन सक्छौँ (गला २ः१९–२१; ३ः१–३, २५–२६; ४ः४–६, ९–३१) ।
यस खण्डबाट यी कुराहरु देख्न सक्छौः
दासी हागारले पुरानो करारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
इश्माएल शरीरबाट जन्मेको पुत्र हो ।
पावलको समयमा यरुशलेमलाई चित्रण गर्ने पुरानो करार थियो (आज पनि छ) ।
अनुग्रहको नयाँ करारलाई प्रतिनिधी गर्ने कुराहरुः
स्वतन्त्र स्त्री साराले नयाँ करारलाई प्रतिनिधी गर्छ ।
इसाहाक परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा जन्मिएको हो ।
नयाँ करारले स्वर्गीय यरुशलेशको चित्रण गर्छ जुन स्वर्तन्त्र छ ।
२३. कमारीको छोरोचाँहि शरीरअनुसार जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको छोरो प्रतिज्ञाद्वारा ।
यहाँ छोराहरु कसरी जन्मे भन्ने कुरामा तुलना गरिएको छ । इश्माएल मानिसको स्वभाविक प्रक्रियामा जन्मे जहाँ परमेश्वरको कुनै हस्तक्षेप रहेन । वास्तवमा हब्राहामले परमेश्वरलाई मद्धत गर्न खोज्दा उनको जन्म भयो । उनले शरीरको कामलाई देखाउछ ।
इसहाक प्रतिज्ञान र विश्वासद्वारा जन्मिएको थियो । उमेरले असम्भव भए तापनि आश्चयपूर्ण रुपमा साराको कोखमा काम गर्नुभएर उनको जन्म भयो (रोम ४ः१८–२१) ।
इसाहाकलाई चित्रात्मक रुपमा ख्रीष्टको रुपमा दिन सक्छौ ः
पहिले नै घोषणा वा प्रतिज्ञा गरिएको थियो (उत १७ः१९) ।
इसाहाकबाट नै वशं स्थापित भयो (उत २१ः१२; रोम ९ः७; हिब ११ः१८) ।
इसाहाकलाई बलिदान चढाइयो (उत २२) ।
इसाहाक तीन दिनपछि अब्राहामकहाँ फर्किए (उत २२ः४–६), आदि ।
व्यवस्था र अनुग्रहको तुलना गर्न यहाँ दुई आमाहरुको तुलना गरिएको छ । यहाँ पावलले कथाको आत्मिक रुप देखाएका छन् ।
“मैले अगमवक्ताहरुसित कुरा गरें, तिनीहरुलाई धेरै दर्शनहरु दिएँ, र तिनीहरुद्वारा मैले दृष्टान्तहरु दिएँ (होशे १२ः१०) ।”
“यी कुराहरु तिनीहरुलाई उदाहरणको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग–युगको अन्त्य आइसकेको छ (१ कोर १०ः११) ।”
२४. यो कुरालाई रुपक दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ । ती स्त्रीहरु दुई किसिमका करारहरु हुन् । एउटीचाँहि सीनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो ।
जसरी हागारबाट दासको जन्म भयो, सीनै पवर्तबाट दिइएको व्यवस्थाबाट पनि दासत्व सुरु भयो । ग्रीक भाषामा हागारको अर्थ चट्टान हो । अरबीहरुले सीनै पवर्तलाई चट्टान भन्ने गर्छन् जहाँबाट मोशाको व्यवस्था आयो । त्यसै गरी साराबाट जन्मेकाहरु स्वतन्त्र छन् जो करारका सन्तान् हुन् ।
२५. हागार अरब देशको सीनै पर्वत हो, र वर्तमान यरुशलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ । किनकी त्यो आफ्नो बालकहरुका साथ दासत्वमा छ ।
यहाँ पावल दुई यरुशलेमको तुलना गरेका छन् । पावलको समयको यरुशलेमलाई हागारले प्रतिनिध्त्वि गर्थिन् । त्यस बेला यरुशलेम रोमीहरुका कब्जामा थियो र त्यहाँका यहूदीहरु पनि दासत्वमा थिए । सबै धर्मको केन्द्र त्यस बेला यरुशलेम थियो । केही समयपछि अर्थात् करिब १९०० वर्ष पहिले त्यहाँका यहूदीहरु छरपष्ट भए र यरुशलेमबाट खेदिए । यसो हुनुको कारण तिनीहरुले प्रभु येशूको समयलाई चिन्न सकेनन् (लूक १९ः४४) । तिनीहरुले सिजरलाई नै राजा माने (यूह १९ः१५) । तिनीहरुका दोस तिनीहरुकै हातमा प¥यो (मत्ती २७ः२५) । फलस्वरुप लामो समयसम्म यहूदीहरु तितरबितर भए र धेरै सङ्ख्यामा मारिए । तिनीहरु हागारका सन्तान भए । अहिलेसम्म पनि तिनीहरु स्वतन्त्र छैनन् । तिनीहरु अझै रितितिथी र महिनाहरु मान्छन् । तर समयको अन्तमा अर्थात महासङ्गष्टकालमा (याकूबको कष्टको दिनमा) तिनीहरु पश्चाताप गर्नेछन् ।
आजको समयमा यहूदीहरु स्वतन्त्र हुने भनेको ख्रीष्टमा रहेरर मात्र हो । यशैया ५३, भजन २२, भजन ६९, जकरियाह १२ः–१४ र सुसमाचारका पुस्कतहरुले येशूलाई देखाउछ । तसर्थ यी पत्रहरुद्वारा तिनीहरुका आँखा खोलिन आवश्यक छ ।
२६. तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् ।
यस खण्डमा दुई कुराहरुको तुलना गरिएको छ ः
दुई स्त्रीहरु (हागार र सारा ) ।
दुई सन्तानहरु (इश्माएल र हागार) ।
दुई करारहरु (व्यवस्था र करार ) ।
दुई पर्वतहरु (सिनै र कलवरी ) ।
दुई सहरहरु (पृथ्वीको यरुशलेम र स्वर्गीय यरुशलेम) ।
हिब्रू १२ः१८–२४ मा सीनैको दृश्य देख्न सक्छौँ जसले दासत्व देखाउछ ।
यहाँ चित्रात्मक रुपमा यरुशलेमलाई आमा भनिएको छ । जसरी अब्राहाम पनि हामी सबैका पिता हुन् (रोम ४ः१६,१७), त्यसैगरी यरुशलेमले रुपक दृष्टान्तको रुपमा (पद २४) स्वतन्त्रबाट जन्मेका सन्तानलाई जनाउछ । यो आमा भन्ने शब्द पुरानो करारबाट साभार गरिएको हो (यशै ६६ः१०–११) ।
२७. किनभने लेखिएको छ, “हे नजन्माउने बाँझी, आनन्द गर, हे प्रसवपीडा थाहा नपाउने, मन खोलेर कराऊ, किनभने पति भएकी स्त्रीभन्दा त्यागिएकी स्त्रीका छोरा–छोरी धेरै छन् ।”
यशैया ५३ पछि जहाँ ख्रीष्टको मृत्यको वर्णन गरिएको छ, यशैया ५४ः१ मा यो व्याख्या गरिएको छ । वास्तवमा यस पदले ख्रीष्टको मण्डलीलाई चित्रण गर्दछ जो धेरै मात्रामा अन्यजातिहरुद्वारा बनिएको छ । यो घटना साराको जिवनमा पनि लागु हुँदछ । तिनी लामो समयसम्म बाँझी रहिन् । तर तिनीबाट प्रतिज्ञाको सन्तान जन्मियो । त्यसैगरी आज हराएका अन्यजातिहरु पनि स्वर्गीय यरुशलेम सरह ख्रीष्टको स्त्रन्त्रतामा प्रवेश गरेका छन् । तर पृथ्वीको यरुशेममा हुनेहरु दासत्वमा छन् जो वर्तमान समयका कट्टर यहूदीहरु हुन् । तिनीहरु थोरै सङ्ख्यामा छन् ।
इस्राएल वर्तमान समयमा केही समयको लागि त्यागिएको अवस्थामा देख्न सकिन्छ । तिनीहरुमा निश्चित समयको निम्ति अन्धोपन छाएको छ (लूक १९ः४४) । मण्डली पूर्ण नभएसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ (रोम ११ः२५) । होशेको पुस्तकमा कसरी इस्राएललाई स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने चित्रण देख्न सक्छौँ (होशे १,२; ३ः१) ।
तर युगको अन्तमा अर्थात हजार वर्ष राज्यमा इस्राएलको आशिषित र उन्नती भएको देखिन्छ । यद्धपि अहिले इस्राएल बाँझीजस्तो देखिन्छ, जसरी सारा पनि थिइन, पछि तिनको सन्तानमा धेरै आशिष भएझैँ इस्राएलमा पनि हुनेछ ।
२८. अब हे भाइ हो, इसाहाकजस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं ।
जसरी इसाहाक परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा आश्चयपूर्ण रुपमा जन्मिए, आज इसाईहरु पनि अद्भुत रुपमा नयाँ गरि जन्मिदछन् (यूह ३ः३, ५) । तिनीहरु मुक्तिको प्रतिज्ञाका हकदारहरु हुन् (गला ३ः९, २२, २९) ।
आज हामी इसाईहरु प्रतिज्ञाका सन्तान भएकोले ख्रीष्टमा स्वतन्त्रतामा जिउनुपर्छ । “किनभने व्यवस्था मोशाद्वारा दिइयो, अनुग्रह र सत्यताचाँहि येशू ख्रीष्टद्वारा आए (यूह १ः१७) ।”
२९. तर त्यस बेला जसरी शरीरअनुसार जन्मेकाले आत्माअनुसार जन्मेकालाई सताउँदथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ ।
इश्माएलले इसाहाकको ठट्टा गरे, यो सोचेर कि उनी नै उत्तराधिकारी हुनेछन् (उत २१ः८–९) । यो घटनाको रुप आजको दिनसम्म पनि देख्न सक्छौँ । आज अरबी मुशलमान र इस्राएल बीच निरन्तर युद्ध र झगडा भइरहने गर्दछ ।
शरीरअनुसार जन्मेकाले प्रतिज्ञाअनुसार जन्मेकालाई निरन्तर सताउने गर्छन् । पावलको जिवनमा पनि यो सत्य भएको देख्न सक्छौँ जसले ख्रीष्टियनहरुको खेदो गरे । आज पनि इसईहरुलाई निरन्तर सतावट भइरहने गर्दछ । शरीर र आत्मा बिच सधै संघर्ष भइरहने गर्दछ ।
३०. तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ ? “कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी–पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुनेछैन ।”
प्रतिज्ञाको सन्तानलाई ठट्टा गरेको देखेर इश्माएलाई निकाल्न साराले अब्राहामसँग बिन्ती गरिन् (उत २१ः१०,१२) । तसर्थ आज पनि हाम्रो जिवनका हरेक व्यवस्थामा आधारित क्रियाकलापहरु निकाल्न आवश्यक छ । किनकी व्यवस्था र अनुग्रह मिश्रण हुन सक्दैन । हाम्रा प्रयासहरुबाट हामी परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न सक्दैनौ । यस खण्डमा त्यस्ता कुरा पालना गर्न लगाउने यहूदीहरुलाई बहिष्कार गर्न आदेश दिइएको छ ।
३१. यसकारा भाइ हो, हामी कमारीका होइनौं, तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हौं ।
अन्तमा पावलले गलातीका विश्वासीहरु कमाराबाटका होइन भनेका छन् । कमाराबाटको सन्तानलाई खेदियो र अत्तराधिकारबाट पन्छाइयो । तसर्थ हामी सबै विश्वासीहरु परमेश्वरका उत्तराधिकारीहरु हौँ र ख्रीष्टका साझे–उत्तराधिकारी हौँ (रोम ८ः१७) ।
Previous Postव्यवस्थाको उदेश्य (गलाती ३ः११-२१)